Food Archives | Save A tareenka
Home > Cuntada
Adduunyada oo dhan, tiifintu waxay leedahay raadayn iyo dhaqangelin aad u kala duwan, tusaale ahaan: Talobixinta Koonfur Afrika ayaa loo baahan yahay, sida ay maraykanka tahay. Waxaa lagaa filayaa inaad ka baxdid caarada u dhaxaysa 15 iyo 25% Ameerika, iyo hadaadanad jeclayn aad u badan…
Qofna ma run ahaantii waa ogyahay sheekada dhabta ah ee shiilan Faransiiska ee France. Waxaan xitaa ma noqon kartaa hubiyo in haddii ay ka yimaadaan France, at dhan. Sug, waa maxay?! Yeap, waxaad xaq u leedahay inaan taas maqlay – Belgiumka iyo Faransiis labadaba ayaa sheegtay in cuntada this, and they both have stories to…
Waxaa jira wax cajiib ah fulinta saabsan aamusnaan eegaysaan daaqada tareenka, ma waxaad u malaynaysaa? Sidaas, ilaawaan frisks ammaanka saaxiib, bacaha Ziplock cad oo cabitaanno ah, eber gaarka ah iyo basaska musqusha-yar. Ma jiro hab ka fiican si ay u sahamiyaan Europe badan tareen ee December. halkan waxaa ku qoran…
Liiska magaalooyinka ugu fiican Yurub vegetarians waxay bilowdey in ay ugu dambayntii heli dheer. Waxaa laga yaabaa in ay wax yar ka raagay inuu heli socday laakiin goobta khudrada ugu dambeyntii waxaa iska. Waxaynu wada ognahay in suxuunta hilibka shay-xukumid bedeley ee dalal badan oo Yurub….
Cunnadu aad bay u ammaan badan tahay, gaar ahaan cuntada macaan. Aad bay u fududahay in ay umushu la markuu ku nool Europe ku siinayaa sabab aad u badan, waxaa ka! The magaalooyinka ugu wanaagsan ee Foodies yihiin in Europe, noogu aamini aynu nahay foodies sidoo, and so will you…